VIDEO-MD GAAS Muxuu ka aamisan yahay Dhulka ka maqan PL ee Laascaanood & Balankii 2014 maka dhabeeyey… – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA VIDEO-MD GAAS Muxuu ka aamisan yahay Dhulka ka maqan PL ee Laascaanood & Balankii 2014 maka dhabeeyey…
VIDEO-MD GAAS Muxuu ka aamisan yahay Dhulka ka maqan PL ee Laascaanood & Balankii 2014 maka dhabeeyey…
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu ku galay loolankii doorashada Madaxtinimada ee sannadkii 2014­kii, in soo celinta Laascaano ay tahay mid waajib ku ah qof kasta oo kunool Puntland, gaar ahaana nidaamka dawladnimada.
Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah diiradda xiligaas u saaray in nidaamka dawladnimada ee Puntland ay waajib tahay in uu difaaco dalka, iyadoo wadajir looga wada shaqeynayo sidii dalka looga difaaci lahaa cid kasta oo ku soo xadgudubta.
Madaxweyne Gaas wuxuu si cad u sheegay 7­dii January 2014 kii in Laascaanood oo xudun u ah khilaafka Somaliland & Puntland aan lagu qabsan FAATAXO, taas oo ula jeeday si nabdeed, aysana ku soo laaban doonin.
In lagu wajaho wixii u baahan siyaasad, siyaasadeeda, wixii u baahan xal milaterina ay tahay in la qaado mid la mid ah ayaa ka mid ahayd balan­qaadyadii Madaxweynaha Puntland. Afar sano ka dib Somaliland waxay qabsatay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool, waxayna Xukuumadda Puntland waday tan iyo xiligaas abaabul dagaal oo ku wajahan sidii ay dib ugu qabsan lahayd gobalka Sool.
Filed in: DHAGEYSI, WARARKA MAANTA